सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका ५ निवासी ५७ वर्षिय कमल प्रसाद दास मोटरसाईकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी पत्नीलाई अस्पताल मै छाडी उपचार खर्च र न्यायका लागी भौतारिएका छन ।
उपचार खर्च जुटाउन र न्याय खोज्दै विहीवार सदरमुकाम राजविराज आईपुगेका दासले पत्रकार, अघिकारवादी र प्रहरीलाई भेटेर सहयोगको याचना गरेका हुन् ।
गत भदौं २८ गते मोटरसाईलको ठक्करबाट उनको ५० वर्षिया पत्नी रमा देवी गम्भीर घाईते भएकी थिइन । अहिले उनी विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेकी छिन् ।
काम विशेषले बाहिर निस्केको बेला हुलाकी सडक अन्तर्गतको मलेकपुर खण्डमा तिब्र गतीमा जादै गरेको स.८प. ८६८२ नम्बरको मोटरसाईकलले रमालाई ठक्कर दिएको थियो ।
प्रहरीले चालक राजगढ गाउँपालिका १ झुटकी निवासी २२ वषर््िाय शिव कुमार यादवलाई मोटरसाईकल सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । मोटरसाईकल पत्थरगाढा प्रहरी चौकीमा राखिए पनि चालक यादवलाई जिल्लामा पठाइएको थियो ।
घाईतेको सम्पुर्ण उपचार खर्च ब्यहोर्ने शर्तमा उनी रिहा भएका थिए । हाल भने उनी फरार भएको गाउँलेहरुले बताएका छन् । हाल सम्ममा औषधी बाहेक रमाको उपचार खर्च वापत ७ लाख ५० हजारको विल भएको छ । जस मध्ये ठक्कर दिने मोटरसाईकलका धनी एवं चालक शिवका परिवारले अस्पताललाई २ लाख ५० हजार मात्र बुझाएको र अरु रकम बाकी नै रहेको . कमलको भनाई छ ।
यसका अलावा औषधी पसलको १ लाख ५० हजार रुपैया पनि तिर्न बाकी नै छ । पत्नीको उपचारको क्रममा साहु महाजन संग चर्काे ब्याजमा लिएको १ लाख रुपैया पनि सकिएको उनले सुनाए ।
पेट, छाती र टाउकोमा गहिरो चोट देखिएको उनको शूरुमा राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिह र छिन्नमस्ता अस्तालमा उपचार गरिएको थियो । तर, अवस्थामा सुधार नआएपछि विराटनगरस्थित न्युरो, नोबेल र त्यसपछि गोल्डेन अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो.।
एक महिना भन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि उनको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको परिवारजनको भनाई छ ।
एलानी जग्गामा वसोवास गर्दै आएका विपन्न अवस्थाका उनी दैनिक मजदृरी गरेर परिवार पाल्दै आएका छन् । रकमकै अभावमा केही वर्ष अघि विरामी परेका एक्लो छोराको सम्पुर्ण उपचार गराउन नसक्दा मृत्यु भएको उनले सुनाए । घरमा कमाउने आपृmु मात्र भएको र पत्नीको हेरचारम खटिनु पर्दा झनै समस्या थपिएको उनको भनाई छ ।